Raadi barnaamijyada tababarka shaqo iyo xirfado aad u hesho in ay ka shaqeeyaan | USAHello | USAHello
Raadi barnaamijyada tababarka shaqo iyo xirfado aad u hesho in ay ka shaqeeyaan
Ma u baahan tahay si aad u hesho a barnaamijyada tababarka shaqo kuu dhow? Ma rabtaa in aad in uu barto xirfado shaqo cusub? Baro oo ku saabsan siyaabo kala duwan oo aad ka heli kartaa tababar shaqo.
Ka hor inta aadan bilaabin wax barnaamijyada tababarka shaqo, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay xirfadaha shaqada aasaasiga ah. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si aad u barato wax akhriska iyo qorista, ama isticmaal kombiyuutar, ama buuxiso codsiga shaqada.
Halkeen ka heli karaa barnaamijyada
maktabadaha Dugsiyada iyo xarumaha bulshada inta badan waxay leeyihiin barnaamijyo si ay u bartaan xirfadaha aasaasiga ah. Waxa kale oo jira waa hay'ad samafal u yeedhay niyadsamida ah. Waxaa laga yaabaa inaad ku arkay dukaamada halkaas oo aad ka iibsan kartaa niyad samida dharka iyo maacuunta loo isticmaalo. lacagta loo isticmaalo dukaamada niyadsamida si loo caawiyo dadka isku diyaariyo shaqada iyo shaqo ka heli. Waxay bixiyaan luqadda Ingiriisiga iyo casharada kale ee aasaasiga ah. Waxaad ku caawin kara in daryeelka caruurta inta aad baran. Meelaha qaarkood, barnaamijyada tababarka niyadsamida functional gaar ah, sida xirfadaha shaqo ee bangiyada iyo cusbitaalada.Raadi niyadsamida deegaanka tababarka xirfadaha iyo taageerada
Isticmaal xarunta ganacsiga ee maxalliga ah
Bulsho waliba waxay saldhigga waajib si ay u caawiyaan dadka shaqo ka heli a. xarumaha shaqada US jira adeegyo lacag la'aan ah oo ka socda dawladda Maraykanka. xarumaha shaqada isticmaalaan magaca “CareerOneStop” On Internet ah, laakiin waxaa laga yaabaa sidoo kale in aad gobolka ama magaalada leeyihiin magac degaanka. Tusaale ahaan, waxa loo yaqaan saldhigyada waajib in Texas “qaatuhu”. xarumaha shaqada loo yaqaan ee Minnesota “CareerForce”.
xarumaha shaqada ayaa kaa caawin kara siyaabo badan, oo ay ku jiraan bixinta tababarka ama heli karo barnaamijyada tababarka shaqada. saldhigyada waajib qaar waxay leeyihiin barnaamijyo functional tababar gaar ah oo qaxootiga iyo muhaajiriinta! Raadi xarunta shaqada ee kuugu dhow oo aad
barnaamijka “Job Corps” Waa barnaamij dawladda ah oo bixiya barnaamijyo lacag la'aan ah waxbarasho iyo tababar xirfadeed ee dadka dhallinyarada ah iyo dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 16 Oo 24 Year. Tababarka waxaa ka mid ah hawlaha daryeelka caafimaadka sida CNA, ilkaha, farsamo farmashiyaha, ku xigeenka maamulka caafimaadka, isku-duwaha of unit caafimaadka, kalkaalisada caafimaadka.Baro Job Corps
Tag Community College
Community Colleges waa dugsi loogu talagalay dadka waaweyn ee da'da ah oo dhan waxay bixiyaan koorsooyin badan oo kala duwan. Waxaad wax samayn karaan barashada luqadda Ingiriisiga ee fasalada fiidkii iyo ilaa koorsada muddo laba sano ah in injineernimada. Kuleejooyinka bulshada waxay leeyihiin dhowr koorsooyin tababar. Tuition waa wax badan ka yar jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyo jaamacadaha. Raadi Community College
Arday waa qof u barto xirfadaha inta aad ka shaqaynaysid. ardayda waxaa loo tababaray shaqada iyo inta badan waxay leeyihiin qaar ka mid ah casharada fasalka. Tani waa waddo kuu fiican haddii aad leedahay xiisaha shaqo gaar ah – Tusaale ahaan, dayactirka baabuurta ama qof koronto – Laakiin aadan haysan xirfadaha weli. CareerOneStop ayaa liiska ku barashada in aad ka raadin kartaa iyaga u.Raadi barashada meesha aad degan tahay
Liiskani wuxuu dabooli karaa oo kaliya qaar ka mid ah fursadaha barashada. هل هناك شركات بالقرب منك تبحث دائمًا عن العمال؟ يمكنك أن تسألهم إذا كانوا راغبين في أخذك كمتدرب وتدريبك. Inta badan, ku kalsoon tahay qofka shaqaalaha ah iyo shaqo ku noqon doonaa dheeraad ah oo muhiim ah in shaqo-badan xirfadaha kasta, maxaa yeelay waxa ay idin bari kartaa xirfadaha.
Raadi ururada caawiya dadka cusub
In magaalooyinka waaweyn, iyo xataa qaar ka mid ah beelaha yar yar, waxaad ka heli doontaa ururada caawiya dadka cusub tababarka in ay ka shaqeeyaan. Hay'adda Tani waxay noqon kartaa dib u dejinta ama hay'ad caalami ah. Waxaa laga yaabaa in mashruuc oo cusub si ay u tababaraan in shaqooyin gaar ah.
Halkan waxaa ku qoran meelaha qaarkood in tababar ku cusub in ay ka shaqeeyaan:
Boston: Machadka Caalamiga ah ee New England waxay bixisaa laba barnaamij tababar shaqo meelaha aadka loo rabo: barnaamij tababar Martigelinta iyo shahaado of adeegyada daryeelka caafimaadka.
Central Texas: IDEA Capital Adult caawisaa in tababarka shaqooyinka aadka loo rabo.
Colorado: Kiro Bean Project Haweenka Dadka wax soo saarka cuntada qalalan halka yeelashada xirfadaha functional iyo xirfad.
Minnesota: horumarka Communidades United Latinas in Service (TILMAAMAHA) koorsooyin lacag la'aan ah 9 Todobaad ee dadka waaweyn ee qaybaha adeegyada daryeelka caafimaadka, dhismaha iyo macaamiisha.
Sidoo kale in gobolka Minnesota: Partnership bixiyaa Hmong barnaamijyada tababarka shaqo US Si aad u baraan baahida xirfadaha warshadaha sare.
Maine: Project New Beeraha Sustainable American Waxay ka caawisaa dadka si ay u noqdaan beeralayda.
Utah: Spice Jikada The Tababarka ayaa qaxootiga in ay Horseedka berrinkii ganacsiga cuntada.
Gobolka Washington: Mashruuca Tababarka Qaxootiga Iyo qaxootiga inay soo galaan warshadaha cuntada adeegga.
Ka sii fikir – Tababarka on mustaqbalkiisa ah oo duurka ku of technology
Sida laga soo xigtay qaxootiga Project sireed , Waxaa jira in ka badan nus milyan oo shaqooyinka bannaan ee dalka Mareykanka! Magaalooyin badan waxay leeyihiin barnaamijyo computer-ku suntan kaliya ee dadka dhowaan. Halkan waxaa ku qoran laba ka mid ah:
Haddii aad hore u leedahay xirfadaha kombiyuutarka ama aad rabto si ay u bartaan, ka fiirsan tababar ku saabsan computer iyo ammaanka Internet, kaas oo sidoo kale loo yaqaan ammaanka elektarooniga ah. Waxaa jira dalabka badan ee dadka qaba xirfadaha ammaanka elektaroonik ah, oo waxay ahaan doonaan shaqo wanaagsan mustaqbalka.Baro shaqooyin technology
Si aad u hesho shahaado, malaha waxa aad helaysaa in ay gudbaan imtixaan. Waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay qaar ka mid ah tababarka ka hor imtixaanka.
Raadi shahaadada aad u baahan tahay oo ku saabsan CareerOneStop Certification Finder.
Ka caawi Upwardly Global Professionals waayo habka cusub si aad u hesho shahaado ee dalka Mareykanka.
Xaggee baad bartaan xirfadaha kombiyuutarka aasaasiga ah
koorsooyinka GED® free online
Waxbarashada dadka waaweyn – Sidee in ay dib ugu dugsiga
Search for tababarka shaqo ee magaaladaada